सबैभन्दा बढी पर्यटक बोक्ने नेपाल एयरलाइन्स - Online sakharapur
दुबै मृगौला फेल भएकी सरस्वती भन्छिन, सके सहयोग गर्दिनु नसके एक शेयर गर्दिनु
बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउनु हुन्छ ? साबधान एकपटक अबस्य पढ्नुहोस !!
असोज १३ गते नेपाललाई खुला दिसा मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैछौं : मन्त्री मगर
बाबुरामले दलितलाई भने : “दलितले पनि हिन्दु धर्म मान्न हुन्छ ? छोड्नुहोस् यस्तो धर्म” (भिडियो)
प्रधानमन्त्रीसँग कहाँबाट आयो सि‌ँगापुरमा उपचार गर्ने पैसा ? कांग्रेसका नेताले गरे खुलासा (भिडियो)
भारत र बेलायतमा मात्र होइन नेपाली चेली अस्मिता बनिन् अमेरिकी सेनामा सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट !
प्रेम प्रस्ताव अस्विकार गर्दा ए’सिड प्रहार गरिएकी किशोरीको स्वास्थ्य झनै बिग्रिदै गएपछि गरियो काठमाडौं रिफर
ओली सिंगापुरबाट फर्किनेबित्तिकै प्रचण्डसँग भेट
सर्वोच्चले रोकिदियो एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा
शनिबारदेखि दूधको मूल्य लिटरमा ६ रुपैयाँ बढ्ने
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सबैभन्दा बढी पर्यटक बोक्ने नेपाल एयरलाइन्स
सबैभन्दा बढी पर्यटक बोक्ने नेपाल एयरलाइन्स
काठमाडौं– सन् २०१८ मा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक बोक्ने एयरलाइन्समध्ये पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरक उड्डयन मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल टुरिज्म स्टाटिक्स–२०१८’ अनुसार बढी पर्यटक बोक्ने मुख्य पाँच एयरलाइन्समध्ये नेपाल एयरलाइन्स पहिलो भएको छ । उसले अघिल्लो वर्ष एक नम्बरमा रहेको भारतको जेट एयरलाइन्सलाई उछिन्दै एक नम्बरमा स्थान जमाएको हो ,आर्थिक सङ्कटमा परेपछि जेट एयरवेज केही महीनादेखि बन्द रहेको छ ।बढी पर्यटक बोक्ने एयरलाइन्सको दोस्रोमा जेट एयरवेज, तेस्रोमा कतार, चौथो स्थानमा फ्लाई दुबई र एयर इन्डिया रहेका छन् । सन् २०१७ मा जेट एयरवेज प्रथम, नेपाल एयरलाइन्स दोस्रो, कतार एयरवेज तेस्रो, एयर अरेबिया चौथो र फ्लाई दुबई पाँचौँ स्थानमा रहेको थियो ।
निगमको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वायुसेवा प्रदायक कम्पनीमा नेपाल एयरलाइन्स पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । उक्त अवधिमा निगमले चार लाख ९३ हजार १७० यात्रुलाई सेवा दिई आफ्नो बजार हिस्सा ११.७ प्रतिशत ओगट्न सफल भएको छ । निगमले भारतका तीन गन्तव्यसहित छ देशका आठ गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ । निगमले हाल दुई वाइडबडी ए–३३०, दुई न्यारोबडी ए–३२० जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको छ । निगमको एक मात्र बोइङ ७५७ बिक्रीका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।यस्तै सन् २०१८ मा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट धेरै सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । अघिल्ला वर्षजस्तै नेपालमा बढी पर्यटक भित्रने पाँच मुलुकमा भारत पहिलो र चीन दोस्रो स्थानमा छन् ।
भारतबाट सन् २०१८ मा एक लाख ९४ हजार ३२३ र सन् २०१७ मा एक लाख ६० हजार १३२ पर्यटक नेपाल आएका थिए । सोही अवधिमा क्रमशः चीनबाट एक लाख ५३ हजार ६३३ र एक लाख चार हजार ६६४ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।बढी पर्यटक भित्रने मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिका तेस्रो स्थानमा छ भने श्रीलङ्का चौथो र संयुक्त अधिराज्य बेलायत पाँचौँ स्थानमा रहेका छन् । सन् २०१७ मा पनि बढी पर्यटक आउने मुलुकमा भारत पहिलो र चीन दोस्रो स्थानमा थिए । अमेरिका तेस्रो र श्रीलङ्का चौथो, बेलायत पाँचौ स्थानमा रहेको थियो । सन् २०१८ मा अमेरिकाबाट ९१ हजार ८९५, बेलायतबाट ६३ हजार ४६६ र श्रीलङ्काबाट ६९ हजार ६४० पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
सन् २०१८ मा नेपालमा ११ लाख ७३ हजार ७२ विदेशी पर्यटक आएका थिए । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.७७ प्रतिशतले बढी हो । यो सङ्ख्यामध्ये पुरुष छ लाख २४ हजार ९२८ र महिला पाँच लाख ४८ हजार १४४ रहेका थिए । अघिल्लो वर्ष सन् २०१७ मा नौ लाख ४० हजार २१८ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ,यो हवाई र स्थल दुवै मार्गबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या हो । पर्यटकको सङ्ख्या बढे पनि समग्रमा पर्यटकको बसाइँ अवधि भने थोरै घटेको देखिएको छ । सन् २०१८ मा पर्यटकको बसाइँ अवधि १२.४ दिन रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १२.६ रहेको थियो ।नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये अधिकांश बिदा मनाउन र मनोरञ्जन तथा धार्मिक उद्देश्यका लागि आउने गरेका छन् । सन् २०१८ मा सात लाख तीन हजार ८४३ बिदा मनाउन र एक लाख ८७ हजार ६९२ धार्मिक कामका लागि आएका थिए । सन् २०१७ मा छ लाख ५८ हजार १५३ बिदा र मनोरञ्जन र एक लाख ४१ हजार ३३ धार्मिक उद्देश्यका लागि नेपाल आएका थिए ।
रङ खुइलिएका जेब्रा क्रसिङ
नव प्रधानसेनापतिको कदमले नेपाली सेनामा भूइँचालो !!
काठमाडौंमा शक्तिशाली भुइचालो र वर्षा
सरकारले फेरी घटायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
असल मान्छेले सधैं किन दु:ख पाउँछन् ? ‘हिरा रगडिएपछि चम्किन्छ, सुनलाई पोल्नुपर्छ’ पढ्नुहोस उत्प्रेरक भनाइहरु !!
धेरै वीर्य फाल्दा के हुन्छ ? फाइदा कि बेफाइदा ?
यौन सम्पर्क गर्नु भन्दा पहिले एक पटक यो पढ्नुहोस नत्र पछुताउनु पर्ला ! !
कम्प्युटर चलाउने हरेकले जान्नै पर्ने किबोर्डका सटकर्टहरु !!! शेयर गरेर जानकारी दिनुहोला !
ध्यानपुर्वक दुईपटक पढ्नुहोस, यी हुन् तपाइको दिमाग हल्लाइदिने खालको सत्य !
सूचना एबम जानकारी